Da'yarta dalka ku cusub oo lagu horumarinayo safka iskuulada gaar loo leeyahay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Da'yarta dalka ku cusub oo lagu horumarinayo safka iskuulada gaar loo leeyahay
La daabacay fredag 27 maj 2016 kl 10.25
Fridolin: waxaa jira iskuulo aan qaabilin carruurtan
Utbildningsminister Gustav Fridolin sawir: TT
Xukumadda iyo xisbiyada alliansen ayaa ku heshiiyey in iskuulda gaarka loo leeyahay fursad loo siiyo in saf iskuulka loogu jiro hormariyaan carruurta dalka ku cusub.
– Maanta waxaa jira iskuulo badan oo ah kuwo goonida loo leeyahay oo aan habo-yaraatee qaabilin carruurta dalka ku cusub. Ma ahan middas wax la qaadan karo iyado oo aan ku jiro xilli ay waddankeena qaabilayo qaxootigii ugu badnaa abad tan iyo dagaalkii labaad ee aduunka, ayuu yeri wasiirka waxbarashada Gustav Fridolin.
– Waxaa jira iskuulo doonaya in ay qaabilaan carruurtan laakiin sharuucda sida ay maanta yahiin ayaa ka hortaagn, ayuu yeri Gustav Fridolin.
Xisbiyadda dowladda iyo kuwa mucaaradka ah ayaa ku heshiiyey in la qafiifiyo sharuucda iskuulka si fursad loo siiyo iskuulada gaarka loo leeyahay qaabilaada carruurta dalka ku cusub. Gaar ahaan waxaa loo suurogeliya in boosaska waxbarashada ee iskuuladan caded ka mid ah arddeyda dalka ku cusub loo meeleeyo, oo laga hormariyo arddeyd kale.
Isbadeelka lagu sameynayo sharciga ayaa jiro doona ugu horeyn saddex sanno kadibna dib u qiimeyn ayaa lagu sameyn doonaa natiijada isbaddelkan keenay si markas looga dhigo mid rasmi ahaan u jiro, sida ay werisay wakaaladda TT.